Tranga fanovozan-kevitra |
Alemana fampifangaroana rafitra 500L
--- microbrewery 500L any Alemana. Ny microbrewery 500l an'ny Firma Hausbrauerei Leidner dia napetraka ary mandeha amin'ny fiandohan'ny taona 2017. Tena traikefa nahafaly ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa amin'ny tompon'ny Andriamatoa Roland. Tena matihanina sy za-draharaha momba ny cr ...
Alemana rafitra 1000L Brewery
Faly mizara vaovao tsara aminao. Ankehitriny manana tsena tsara any Eropa izahay, ity misy labiera 1000L. Ity rafitra famokarana labiera ity dia labiera mpamokatra sambo 4 misy fermenter 3pcs 1000L sy 3pcs 2000L. Izahay koa dia nanao ny insulated avo roa heny araka ny ...
Orinasa fanaovana labiera mitambatra 500L any Frantsa
Ity no mpanjifanay any Frantsa, Labo du Brasseur ny labiera ary apetraka any Frantsa. Ny labiera dia rafitra mitambatra 500L miaraka amin'ny fanafanana etona sy fermenter-piainana 4sets ary tanky labiera mamirapiratra 2sets. Ny mpanjifa ...
Fermenter 7BBL any Canada
Ity fermenter 7BBL ity dia nanondrana any Canada ary nahazo laza avo tamin'ny mpanjifanay. Manao sary fermenter alohan'ny fanaterana dia nandefa ny tapany fahatelo ny mpanjifa hijerena ny ...
Orinasa mpamokatra labiera any Canada 3.5BBL
Fanehoan-kevitry ny mpanjifa any Canada
Biribiazy 1000L Bolivia
Ity dia mpanjifanay be any Bolivia, efa niresaka imbetsaka sy lava izahay. Farany, ataon'izy ireo antoka izay ilainy amin'ny fitaovana fanaovana labiera. Ary koa, nisaotra ahy ny mpanjifa noho ny faharetako sy ny fijeriny ny tetikasany. Satria nifanarahana ny fifanarahana nifanaovanay, izahay dia ...
Belza 2000L sy labiera 4000L
Tetikasa fanaovana labiera Belzika 2000L sy 4000L Ankehitriny dia mamokatra tetikasa famokarana labiera 2000L sy 4000L ho an'ny mpanjifanay izahay, ity mpanjifa nihaona taminay tamin'ny fampirantiana an'i Nuremberg tamin'ny taona 2018. Ary niresaka momba ny antsipirian'ny hafanana hanaovana ny drafitry ny labiera izahay. Ity ambany ity dia mpamokatra labiera ankehitriny: ...
Fermentera 1000L Belzika
Ity labiera ity natsangana tany Belzika, izay natsangana tamin'ny 2012. Ary ny tompon'ny Franky dia te-hanitatra ny labiera amin'ny taona 2017. Ny fermentera dia 700L, ary ny PVRV sy PRV dia marika KIESELMANN ho takian'ny mpanjifa. ...